मलेशियाकाे लागी राेजगारी नखुल्दै धमाधम अन्तरवार्ता ! बिभागले मार्याे छापा - Maxon Khabar
Home / News / मलेशियाकाे लागी राेजगारी नखुल्दै धमाधम अन्तरवार्ता ! बिभागले मार्याे छापा
मलेशियाकाे लागी राेजगारी नखुल्दै धमाधम अन्तरवार्ता ! बिभागले मार्याे छापा
काठमाडौं २०७६ साउन १८ ।
लामाे समय देखी राेकिएकाे बैदेशिक राेजगारीकाे प्रमुख गन्तब्य मलेसियामा नया नेपाली कामदार पठाउन रोकिएको पनी करिब १४ महिना बितिसक्यो । नेपाल र मलेशिया सरकार बीच ९ महिना अगाडी नेपालका कामदार लैजाने पुन सम्झाैता भएपनी अाजसम्म कामदार मलेशिया लैजाने प्रक्रिया सुरु भएकै छैन । तर शनिबार म्यानपावर कम्पनीहरुले मलेसियामा कामदार लाने भन्दै अन्तरवार्ता लिन सुरु गरेका छन ।
वैदेशिक रोजगार विभागले छापा मार्दा यस्तो रहस्य खुलेको हो । र विभागले क्लासिक अमेभरसिज म्यानपवरले लिइरहेको अन्तरवार्ता स्थलमा छापा मारेको हाे । जहा १५० जना युवा मलेशियाका लागी अन्तर्वार्ता दिन लाइनमा बसेका थिए । बिभागले छापा मारेपछी कम्पनीले वावासुन प्याकेजिङ कम्पनीका लागि भन्दै अन्तरवार्ता लिइरहेको भेटिएको जनाएकाे छ ।
बिभागले अन्तर्वार्तामा प्रयोग गरिएका कागजात नियन्त्रणमा लिइ म्यानपावरका सञ्चालकलाई २४ घण्टाभित्रै विभागमा उपथ्थिति हुन निर्देशन दिएको छ । म्यानपावर व्यवसायीले बन्द रहेको मलेसिया कामदार पठाउने स्वीकृति नखुलाए पूर्वस्वीकृतिका आधारमा मलेसियाको लागि अन्तरवार्ता लिन थाल्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
अन्तरवार्ताका स्थलमा मलेसियाकै कम्पनीबाट ३ जना प्रतिनिधि पनि सहभागी भएको विभागले जनाएको छ । उक्त संस्थाले विभागबाट साे कम्पनीका लागि पूर्वस्वीकृति पनि नलिएको प्रराम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएकाे बिभागले जनाएकाे छ । Visit Nepali Tech/Entertaimnment site Worldlinknepal